Izimfuneko main ezisebenza iveni abashayeli beya ezimotweni zabo, ukuthembeka, ukusebenza kahle, lula ukusebenza futhi, yebo, umzimba omkhulu nge ukulayisha obunamandla. Ingabe-ke nalezi zimfuneko Mitsubishi L200? Izibuyekezo abanikazi ukuthi angakwenza. Ake sizame ukuqinisekisa le ngokuhlola izimfanelo zaso.
Le modeli wabonakala ngo-2007, futhi mangisho, kwembula uqobo kuphela isandla kakhulu. Rally-kugasela abalandeli ayaqala kakade ukujwayela logo ye-Mitsubishi. Ngaphambili, konke ngaphakathi enkampanini wayifihla ngaphansi Pajero umzimba, inkampani manje imelela ncamashi Mitsubishi L200. Izibuyekezo ngalokhu castling omuhle kuphela. Phela, endleleni akubi sibi kakhulu, futhi okuphambene nalokho. Yebo, futhi ukubukeka yokuqala amaningi okuningi okufana nayo.
ukukhathazeka umzimba iveni yomnikazi ayenzi ngoba yilona kwesisekelo olwesimanje enamandla Spar uzimele. Kungenzeka ukwandisa amandla 1,000 kg. Yebo, okuningi. Manje, i-trailer okuthwala 2700 kg. Imoto has ezimele phambi ukumiswa. esetshenziswa Ngaphambili torsion Amabha kukhona umlando, manje umklami usebenzisa ikhoyili iziphethu.
I Onjiniyela wanquma ukuthi abathengi ezahlukene uncamela izikimu ezahlukene. Isikimu lokuqala - Easy Khetha. It wasetshenziselwa phezu izimoto omkhaya odlule. Kufanele ixhunywe nge isango abampofu. Kukhona umsebenzi imoto kugiye ongaphakeme. I ukuhamba kuqhathaniswa ezishibhile futhi elula okungahambisani zilulaza ukusebenza yayo phezu sezwe. Labo abenza esikhathini esiningi luhamba emigwaqeni okuqinile ukudluliswa ezihlongozwayo Super Khetha. The main lolwehlukanisa zalo isikhungo umehluko, okuyinto ivinjelwe isokhethi esakhelwe, okuvumela travel kuwo wonke-wheel drive kwi enamathela kanzima Mitsubishi L200. Izibuyekezo kokubili izikimu zinhle, umehluko omncane kuzo akuyona.
Mayelana motor, lapha ke Turbo, ivolumu 2.5 litre 4-CyL. nenjini ezinjalo okwazi sigodle "amahhashi" 136 at 4 izinkulungwane linemibhikisho ngomzuzu. Uma lokhu torque engu kuyinto 314 Nm. Ngo kukhethwa umthengi kanye 4-speed automatic transmission kanti 5-ngesivinini Mechanics classical. Steering akahlukile izimoto usebenzisa ezivamile yokubeka kanye pinion indlela. Ngenxa phambi ukubopha disc izenzo njengento esetshenziswayo futhi emva - sigubhu. Ukufaka ezinye abasizi kungenzeka kuphela imali, futhi, ngokwethembeka kunalokho enkulu. Uhlelo kuphela okuyinto kungenziwa yayala ngesikhathi kukhethwa yonke-wheel drive, ABS ehambisana EBD iyinhlangano distribution amandla phezu Mitsubishi L200. Izibuyekezo bathi lokhu kwanele ukuba azethembe beshayela imoto.
Ngesikhathi esifanayo abafisa ukuthenga imoto endaweni ephelele Super Khetha, angaba namandla okuwunikela uhlelo ABS okuzokwenziwa ihlanganiswe kuqiniswa uhlelo M-ASTC.
Ngokuqondene nezwe, kwakungekho lezimanga. Labo ayekade off-road, ngeke usakubona nobunzima ekutholeni kuwo. Kodwa okunye engavamile kakhulu ahlale beshayela imoto esiphakeme kangaka. Kumphambukisa ikholomu ukulungiswa ekhethekile kungaqali, mhlawumbe ngenxa yokuthi umshayeli iyatholakala futhi ngakho eziningi isikhala sizikhandle ulungise esihlalweni walo, bese ulungisa isondo Mitsubishi L200. Izibuyekezo mayelana lesi sici, okungenani, okuhle. Yonke enye into elingaphakathi kwenziwa isitayela classical yalesi brand, zonke izinto futhi icacile. Ngaphakathi, kule moto azizwa kuhle ukhululekile, ngoba lokhu Mitsubishi L200. Izimpawu uhlu zakhe kungaba eside, ukuhlaziya yonke imininingwane, kodwa ngempela ezingeni imoto kungenziwa ehlezi beshayela nokulisebenzisa inhloso yazo. Awukwazi ngisho umzila ongcono ukuthi ncamashi ukukukhuthaza quality yayo.
I-thermopaste KPT-8: incazelo kanye nezici. I-KPT-8 - ukushisa okwenza unamathisele
I-GAZ-310231-110: imininingwane kanye nezithombe
Anti Hijack - kuyini? Ingabe ngikukhubaza kanjani kumodi?
I kwasemuva drive ngezandla zakho - ukonga ezingokoqobo futhi umphumela omuhle
Amavithamini kubagijimi - kubalulekile, kudingekile, ewusizo
Izindlu usebenzisa ubuchwepheshe Canadian: ukubuyekezwa. ukwakhiwa ubuchwepheshe saseCanada Uhlaka izindlu
Ikhekhe "Earl yezincithakalo 'ukhilimu omuncu nezinye amakhekhe ukhilimu omuncu
Izicathulo ze-Caterpillar - izicathulo zentsha nesibindi!
Indlela yokudla kahle inkukhu ngokupheka izitsha ezahlukene